အင်္ဂလန်မြေမှာ လီဆူးတိုင်းရင်းသူဝတ်စုံလေးနဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့ ခင်လေးနွယ် - Cele Platform
အင်္ဂလန်မြေမှာ လီဆူးတိုင်းရင်းသူဝတ်စုံလေးနဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့ ခင်လေးနွယ်
အပျိုကြီးမမ ခင်လေးနွယ်တို့ကတော့ ချစ်သူရှိနေပြီလားဆိုတာ သံသယဖြစ်ချင်စရာပဲနော်။ Single အဖြစ်နဲ့ နေပြီး အခုတော့ချစ်ရတဲ့သူတွေ့ပြီလားဆိုတာတော့ သူမကိုယ်တိုင်အတိ အလင်းပြောမှပဲ သိရတော့မယ်ထင်ပါရဲ့ပရိသတ်ကြီးရေ။ လက်ရှိမှာတော့ မိခင်လေး တစ်ယောက် အင်္ဂလန်နိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေပြီး သူမရဲ့ချစ်စဖွယ်ပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်မှာဝေမျှလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လီဆူတိုင်းရင်းသူလေးဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ရိုးရာဝတ်စုံလေးကို အမြဲတမ်း အမြတ်တနိုးနဲ့ဝတ်ဆင် တတ်သူ တစ်ယောက်လည်ြး့ဖစ်ပါတယ်။ အသက်သုံးဆယ်ကျော်အရွယ်ဆိုတာ ထင်ရက်စရာမရှိအောင်ကို နုပျိုပြီးလန်းဆန်းနေတဲ့သူမရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေက သက်သေပါပဲ။ အမြဲလိုလိုခရီးထွက်တတ်ပြီး ပျော်စရာအချိန်တွေကို အကျိုးရှိရှိကုန်ဆုံးတတ်သူ တစ်ယောက်ပေါ့။
အမြဲတမ်းလန်းဆန်းတက်ကြွနေပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပုံစံလေးကတော့ တကယ့်ကိုသူမရဲ့ အားသာချက်လေးပေါ့နော်။ သူမရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို ” အင်္ဂလန်ရောက် လီဆူမလေး တစ်ယောက်…. ချစ်သူမပါတော့ လွမ်းရတာပေါ့.. ” ဆိုပြီးဝေမျှလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ လီဆူမလေးကို ချစ်တဲ့သူတွေရှိလား။Myanmarload
အပြိုကွီးမမ ခငျလေးနှယျတို့ကတော့ ခဈြသူရှိနပွေီလားဆိုတာ သံသယဖွဈခငျြစရာပဲနျော။ Single အဖွဈနဲ့ နပွေီး အခုတော့ခဈြရတဲ့သူတှပွေီ့လားဆိုတာတော့ သူမကိုယျတိုငျအတိ အလငျးပွောမှပဲ သိရတော့မယျထငျပါရဲ့ပရိသတျကွီးရေ။ လကျရှိမှာတော့ မိခငျလေး တဈယောကျ အင်ျဂလနျနိုငျငံကို ရောကျရှိနပွေီး သူမရဲ့ခဈြစဖှယျပုံရိပျလေးတှကေို လူမှုကှနျယကျမှာဝမြှေလိုကျတာပဲဖွဈပါတယျ။
လီဆူတိုငျးရငျးသူလေးဖွဈပွီး သူမရဲ့ရိုးရာဝတျစုံလေးကို အမွဲတမျး အမွတျတနိုးနဲ့ဝတျဆငျ တတျသူ တဈယောကျလညျွး့ဖဈပါတယျ။ အသကျသုံးဆယျကြျောအရှယျဆိုတာ ထငျရကျစရာမရှိအောငျကို နုပြိုပွီးလနျးဆနျးနတေဲ့သူမရဲ့ပုံရိပျလေးတှကေ သကျသပေါပဲ။ အမွဲလိုလိုခရီးထှကျတတျပွီး ပြျောစရာအခြိနျတှကေို အကြိုးရှိရှိကုနျဆုံးတတျသူ တဈယောကျပေါ့။
အမွဲတမျးလနျးဆနျးတကျကွှနပွေီး ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ပုံစံလေးကတော့ တကယျ့ကိုသူမရဲ့ အားသာခကျြလေးပေါ့နျော။ သူမရဲ့ပုံရိပျလေးတှကေို ” အင်ျဂလနျရောကျ လီဆူမလေး တဈယောကျ…. ခဈြသူမပါတော့ လှမျးရတာပေါ့.. ” ဆိုပွီးဝမြှေလိုကျတာပဲဖွဈပါတယျ။ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ လီဆူမလေးကို ခဈြတဲ့သူတှရှေိလား။Myanmarload
ရိုက်ကွင်းမှာ မတော်တဆဖြစ်ပြီး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ ခိုင်သင်းကြည်